October 13, 2021 sonsonlinlin 0
မှဲ့ ကပြောပြတ့ သင့်ရဲ့အချစ်ရေး… ပါးပေါ်က မှဲ့ပိုင်ရှင် ရည်းစားရဖို့ ဘယ်တော့မှအောက်ကျမခံဘူး။ သေလောက်အောင်ချောနေ လန်ထွက်နေပါစေ သဲသဲလှုပ် ချစ်မပြ တတ်ဘူး .. ကိုယ်က ချစ်တဲ့သူထက် ကိုယ့်ကို ချစ်တဲ့သူနဲ့ပဲ ဖူးစာပါရော။ မှဲ့ ကပြောပြတ့ သင့်ရဲ့အချစ်ရေး… မှဲ့ ကပြောပြတ့ သင့်ရဲ့အချစ်ရေး… မှဲ့ ကပြောပြတ့ သင့်ရဲ့အချစ်ရေး… နဖူး..ပေါ်က မှဲ့ပိုင်ရှင် သနားတတ်တဲ့စိတ် အားနာတတ်တဲ ့စိတ်ကြောင့် ချစ်သူတစ်ယောက်ရတတ်တယ်။ အဲ့ချစ်သူက အနိုင်ယူတာ […]
မိန်းခလေး တော်တော်များများက အိမ်ထောင်ကျ ကံကောင်း ၊ မကောင်း ဆိုတာ မသိနိုင်ပါဘူး ။ ကိုယ်တွေ့ဖူးခဲ့တဲ့ မိန်းခလေးတွေ ရှိတယ် ။ (1) အိမ်ထောင် မကျခင်ကတော့ ယောက်ျားတွေနဲ့ တယောက်ပြီးတယောက်တွဲ ၊ တယောက်တောင် မပြတ်သေးဘူး နောက်တယောက်က အဆင်သင့်ပဲ ။ အဲဒီလို မိန်းခလေး တော်တော် များများက အိမ်ထောင်ကျတော့ ကံကောင်း လိုက်ကြတာ ။သူတို့ ယောက်ျားတွေက ရွှေတွေ ငွေတွေ […]
မန်ကျည်းသီးနဲ့ထန်းလျက်ရှိရုံဖြင့် ဝိတ်ကျလှပပြီး ဝက်ခြံကင်းစင်စေတဲ့သဘာဝနည်းလမ်း…
မန်ကျည်းသီးနဲ့ထန်းလျက်ရှိရုံဖြင့် ဝိတ်ကျလှပပြီး ဝက်ခြံကင်းစင်စေတဲ့သဘာဝနည်းလမ်း… ကျနော်ကအဲဒီ မြေအိုး သေးသေး လေးထဲကို ရေ မပြည့်တပြည့်ထည့်ပြီး မကျည်းသီး လက်တဆုပ်ခန့် ထန် းလျက် အလုံး သေးသေးလေးတွေ ၁၅ လုံးခန့်။ ဆား ဇွန်းသေးသေး တစ်ဇွန်းခန့်။ အဲဒီ ၃မျိုးကို ဒီအတိုင်းထည့်ထားလိုက်တယ် မမွှေနဲ့ မွှေစရာ မလိုဘူး။ မွှေရင် အဖတ် မှုန်တွေ ထလာလိမ့်မယ်။ တစ်ချက်မှ မမွှေဘဲ သူ့ဘာသာ ကြည်တက် လာတဲ့ […]
ဆားဝက်ခြံ (blackheads) ဆိုတာ ဘာလဲ? ဆားဝက်ခြံဆိုတာဟာ အဆီများ, အရေပြားဆဲလ်သေများ, ဆံပင်ပေါ်က keratinအလွှာများစသည်တို့က ချွေးပေါက်များအတွင်း သို့ ဝင်ရောက်ပိတ်ဆို့ခြင်းကြောင့် ဖြစ်ပေါ်လာသော အရေပြာ းပြဿနာ တစ်ခုဖြစ် ပါတယ်။ ဆားဝက်ခြံများဟာ မျက်နှာပေါ်တွင်သာမက ကျောဘက်, နားရွက်နှင့် ချွေးပေါက်ရှိသော အခြားနေရာ များပေါ်တွင်လဲ ဖြစ်ပေါ်နိုင် ပါတယ်။ Skin care အမျိူးမျိူး အသုံးပြုပေမယ့် ဆားဝက်ခြံတွေ ရှိနေသေးတယ် ဆိုသူတွေအတွက် အကုန်အကျသက်သာပြီး လွယ်ကူတဲ့ […]
သင်ရွေးချယ်လိုက်တဲ့ ပန်းလေးကတစ်ဆင့် သင်ဘယ်လောက်အတ္တကြီးလဲ ပြောပြမယ် တစ်စုံတစ်ယောက်ကို မချစ်ခင် ကိုယ့်ကိုယ်ကို အရင်ချစ်တတ်အောင် ကြိုးစားရမယ်တဲ့။ ဟုတ်ပါတယ်…ကျွန်မတို့ဟာ သူတစ်ပါးကို မချစ်ခင် ကိုယ်ကိုယ်ကို အရင်ချစ်တတ်အောင် ကြိုးစားရပါမယ်။ ဒါပေမယ့် ချစ်တာနဲ့ အတ္တကြီးတာက မတူပါဘူး။ ကိုယ်တိုင် ပျော်ရွှင်ဖို့ ၊ အောင်မြင်ဖို့အတွက် သူတစ်ပါးကို စိတ်ဆင်းရဲ၊ စိတ်အနှောင့်အယှက် ဖြစ်အောင်လုပ်တာမျိုးကို အတ္တကြီးတယ်လို့ ခေါ်ပါတယ်။ ဒီနေ့မှာတော့ သင့်ရဲ့ရွေးချယ်မှုတွေကတစ်ဆင့် သင်ဘယ်လောက် အတ္တကြီးလဲဆိုတာကို ပြောပြပေးသွားမှာပါနော်…. နံပါတ် […]
အ သက် ကြီး လာ ရင် ထိပ် ပြောင် တာ မျိုး ဖြစ် လေ့ ရှိ တာ ပါ ပဲ။ ဒီ လို ထိပ် ပြောင် တဲ့ နေ ရာ မှာ ဆံ ပင် ပြန် ပေါက် လာ စေ ဖို့ ကူ ညီပေး မယ့် သ ဘာ […]